अगस्ट 1, 2018 अगस्ट 1, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments डा. राम बहादुर बोहरा
स्वास्थ्य हाम्रो गहना हो स्वास्थ्य रहन हामीले अनेकौं नियमको पालना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सुपारीको बेफाइदा मात्र होइन केही फाइदा पनि छ तर आज मैले अत्यधिक सुपारीको सेवनबाट हुन सक्ने खराबीबारे प्रकाश पार्ने जमर्को गर्दैछु ।
स्वास्थ्यका लागि सुपारी दैनिक सेवन गर्नु हानीकारक छ । सुपारीलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने बस्तु मानिएको छ । अत्यधिक सुपारी चपाउदा दाँतलाई नोक्सान पुराउने गर्छ । सुपारीको उपयोग अस्थमा (एल्कोलोइड हैसोलिनको ब्रोनकोनिक्किक्टव असरको कारण ) र गर्भवस्था (एबर्टिफैक्टर) मा सुपारीले नोक्सान गरेको प्रमाणित भइसकेको छ । सुपारी चपाउने व्यक्तिहरुमा मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना बढेकाले सुपारी सेवन गर्नु हानीकारक छ ।
← खोकीको घरेलु उपचार
रिंगटा किन लाग्छ ? →
अप्रील 3, 2018 साइन्स इन्फोटेक 2
सेप्टेम्बर 28, 2018 साइन्स इन्फोटेक 2
फ्रेवुअरी 18, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1